Maalgashi Weyn: TinderBox | Martech Zone
Khamiis, Juun 23, 2011 Isniin, February 4, 2013 Douglas Karr
Ku dhawaad ​​toddobaad ka hor, DK New Media ayaa lagu daray TinderBox, a Xalka Maareynta Soo-jeedinta, liiska macaamiisha sii kordheysa. Waxaan ka qoray TinderBox Markii ugu horreysay ee ay bilaabeen… iyo wax yar ka dib markii aan noqonnay macmiil ay iyagu leeyihiin. Waxaan ku faraxsanahay inaan is caawino sababtoo ah awooda cajiibka ah ee xalkeedu leeyahay.
The TinderBox dalabku waa mid cajiib ah oo wuxuu i badbaadiyey saacado saacadaha waqtiga. Asal ahaan, waxaan kudarsaday meel wax lagu keydiyo dhamaan badeecada iyo adeegyada aan bixino. Maaddaama rajadu ay codsanayso soo-jeedin, koox kasta oo ka mid ah kooxdayada ayaa geli kara oo soo qabsan kara qaybaha aan u baahan nahay, daabici karnaa soo-jeedinta, sugi karta ogeysiiska ah in rajadu ay aragtay, ka jawaabto wixii su'aalo ah… oo ay hesho aqbalaad. Shaki iigama jiro in softiweerku laftiisu runti gacan ka gaystay xiritaanka heshiisyada qaar.
TinderBox waxay u saamaxdaa isticmaaleyaasha inay maareeyaan dhammaan dhinacyada abuuritaanka dukumintiga oo ay ka mid yihiin: qorista, qaabeynta, maamulka, oggolaanshaha, iyo ka-raadinta hal is-dhexgal oo fudud. Kooxaha waaweyni waxay si aan kala go 'lahayn ugu dhex milmi karaan TinderBox xalalka jira ee CRM sida Salesforce.com, iyagoo hagaajinaya qulqulka shaqadooda iyo yaraynta waqtigooda si ay u xidhaan meherad cusub. TinderBox waxay hadda macaamiil ku leedahay 7 dal, oo taageera qorshayaal iyo dukumiintiyo ku qoran 4 luqadood.
Maanta, waan ku faraxnay markaan maqalnay in TinderBox ay maalgelisay HALO, oo ah hindise goboleed lagu maalgelinayo shirkadaha farsamada ee leh awood weyn. HALO waxay u taagan tahay Hoosier Angels Raadinta Fursado. Techpoint waxay maamushaa kooxda maalgashadayaasha HALO. Maalgashigani wuxuu wadarta maalgashiga HALO ee shirkadaha Indiana ka dhigayaa $ 17.1 milyan 36-kii bilood ee la soo dhaafay.
TinderBox waa mid kale oo ka mid ah safaf dhaadheer oo shirkado Indiana ah oo guryo ku koray kuwaas oo xardhay niches qiimo leh oo ku saabsan maareynta iibka iyo cabiraada suuq geynta. Mark Hill, kaqeybgalaha HALO iyo gudoomiyaha guddiga maamulka TechPoint.
Shirkaddu waxay sii waddaa inay ku darto astaamo iyo shaqooyin aan caadi ahayn - oo ay ku jiraan digniinta SMS, Soo-jeedinta Soo-jeedinta, Meel-dejinta Soo-jeedinta (waxay ku jirtay casriyayntii ugu dambeysay… iyo wax aan si buuxda uga faa'iideysan doonno), iyo mawduuc buuxa. Soo jeedimahayagu waxay u muuqdaan kuwo cajiib ah xitaa waxaan ku dari karnaa fiidiyowyo iyaga ku jira:
Waa kan muuqaal hordhac ah. Hubso inaad booqato oo aad iska qorto a maxkamad bilaash ah!
Tags: soodhawaynta softiweerkahindisahasoo jeedinta softwaresoo jeedinta iibkaiibinta softiweer softwaresantuuqa
Taariikhda isku xidhka bulshada
Jun 23, 2011 at 4: 14 PM
Wax yar ayaan ka akhriyay TinderBox, laakiin waa wax aad u wanaagsan in la arko inay sii kordheyso oo ay soo fiicnaanayaan. Hadda haddii kaliya TinderBox ay xal u heli karto cabsida laga qabo RFP.
Jun 23, 2011 at 6: 00 PM
Waxay leeyihiin habab wanaagsan oo wax lagu keydiyo oo loogu talagalay raadinta iyo keydinta waxyaabaha ku jira. Waxaan u maleynayaa in nidaamku si fiican ugu shaqeyn karo RFPs… laakiin waa inaad raacdaa koontada Pro si aad u wada hesho.
Jun 23, 2011 at 8: 38 PM
Waad ku mahadsan tahay aqbalitaanka wanaagsan Doug - waxaan ku faraxsanahay inaan macmiil u noqonno DK New Media!